Ny fitsapana klinika vaovao dia mikaroka ny fanentanana ati-doha lalina hitsaboana ny Alzheimer
Janoary 22, 2022 2 Namaky 2 aho
"Fantatray tamin'ny fampiasanay ny DBS efa ho roapolo taona mba hitsaboana ny fikorontanan'ny fihetsiketsehana toy ny Parkinson sy ny horohorontany tena ilaina fa fitsaboana azo antoka sy azo leferina amin'ny ankapobeny ny fomba fitsaboana," hoy ny Dr. Whiting. Olona maherin'ny 160,000 eran-tany no nahazo fitsaboana DBS ho an'ireo fepetra ireo.
Ny AHN dia iray amin'ireo tranonkala 20 monja any Etazonia nofantenana handray anjara amin'ny Fianarana ADvance II izay atao any Kanada sy Alemana ihany koa.
Ny aretin'i Alzheimer no endrika mahazatra indrindra amin'ny dementia. Tombanana ho 6.2 tapitrisa, na iray amin'ny Amerikanina sivy 65 taona no ho miakatra no miaina miaraka amin'ny Alzheimer; 72 isan-jato no 75 taona na mihoatra. Ny Alzheimer dia aretina mivoatra ary eo amin'ny dingana farany dia misy fiantraikany amin'ny neurons ao amin'ny ampahany amin'ny atidoha izay ahafahan'ny olona iray manao asa fototra ara-batana, toy ny mandeha sy mitelina. Ny aretina dia mahafaty amin'ny farany ary tsy misy fanafodiny.
Ny DBS ho an'ny Alzheimer dia misy ny fampiasana fitaovana nambolena mitovy amin'ny pacemaker fo sy tariby roa mifamatotra izay mandefa pulse elektrika malefaka mivantana mankany amin'ny faritry ny atidoha antsoina hoe fornix (DBS-f), izay mifandray amin'ny fitadidiana sy ny fianarana. Ny fanentanana elektrônika dia inoana fa manetsika ny circuitry fitadidiana ao amin'ny atidoha mba hanatsara ny asany.
Ny fianarana kisendrasendra, roa-jamba dia haharitra efa-taona ho an'ny mpandray anjara, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia handalo ny fanombanana Alzheimer manara-penitra alohan'ny hametrahana ny neurostimulator. Ny valin'io fanombanana ara-batana, ara-tsaina, ary ara-tsaina io dia hatao fandrefesana fototra satria tombanana tsy tapaka ny tahan'ny fivoaran'ny Alzheimer mandritra ny faharetan'ny fianarana.
Aorian'ny implantation, ny roa ampahatelon'ny marary dia hatao kisendrasendra mba hampihetsika ny neurostimulator ary ny ampahatelony dia hiala amin'ny fitaovany. Ireo marary izay maty ny fitaovana amin'ny fanombohan'ny fianarana dia hampavitrika izany rehefa afaka 12 volana.
Nandritra ny fitsapana ara-pitsaboana, ny mpandray anjara amin'ny fianarana dia hanara-maso ny ekipan'ny AHN neurologista, mpitsabo aretin-tsaina ary neurosurgeon, anisan'izany ny Dr. Whiting sy ny AHN neurosurgeon ary ny DBS specialist Nestor Tomycz, MD.
Mba hahafeno fepetra amin'ny fitsarana, ny marary dia tsy maintsy 65 taona na mihoatra, voan'ny aretina Alzheimer malemy, salama tsara, ary manana mpikarakara voatendry na olona ao amin'ny fianakaviana izay hiaraka amin'izy ireo amin'ny fitsidihan'ny dokotera.
"Ny valin'ny dingana teo aloha amin'ity fitsapana klinika ity dia mampanantena ary manondro fa ny fitsaboana dia mety hitondra soa ho an'ny marary Alzheimer malemy amin'ny fanamafisana sy fanatsarana ny fiasan'ny saina," hoy ny Dr. Whiting. "Ny filazana fa ny vokatra mahomby amin'ity fanadihadiana ity dia mety hanova ny fiainana ho an'ny Amerikana an-tapitrisany tratry ny aretina mahafaty sy mampalemy dia tsy fanambaniana. Faly izahay fa anisan'ireo vondrona fandidiana miavaka eto amin'izao tontolo izao izay manolotra ny mararin'ny Alzheimer amin'ity fanavaozana ity. "
Teo ambanin'ny Dr. Whiting mpitarika, Ny Hôpitaly Allegheny an'ny AHN dia efa ela no lohalaharana amin'ny ezaka ataon'ny mpisava lalana mba hampandrosoana ny fampiasana fanentanana lalina amin'ny ati-doha. Ny hopitaly no voalohany tany amin'ny faritra andrefan'i Pennsylvanie nampiasa ny teknolojia hitsaboana ny horohorontany tena ilaina sy ny aretin'i Parkinson, ary vao haingana, ny Dr. Whiting sy ny ekipany dia nanomboka ny dingana faharoa tamin'ny fitsapana klinika nanadihady ny fahombiazan'ny DBS mba hanampiana amin'ny fitantanana ny matavy loatra.
More on: Kanada | Hospital | Etazonia | Pennsylvania
Ny fananiham-bohitra an'i Ukraine ao Rosia dia mandrisika ny Ransomware & Malware Etazonia|
Tsy raisina intsony ny sambo Rosiana any amin'ny seranan-tsambon'i Etazonia Etazonia|
Previous Jamaika dia hanao sonia MOU vaovao momba ny fampandrosoana ny fizahantany miaraka amin'i Espaina
Manaraka Armani beauty dia manambara ny endrika hatsaran-tarehy vaovao
Kristin Smeltzer hoy:
Janoary 25, 2022 amin'ny 08:17
Ny vadiko dia fantatra fa voan'ny aretin'i Parkinson vao haingana teo amin'ny faha-67. Ny soritr'aretiny dia ny fihetsehan'ny tongotra, ny fitenenana manjavozavo, ny fitenenana ambany, ny faharatsian'ny sora-tanana, ny fahaizany mitondra fiara, ary ny tanany havanana dia tazonina amin'ny zoro 45 degre. Napetraka tao amin'ny Sinemet nandritra ny 7 volana izy ary avy eo dia nampidirina Sifrol sy rotigotine izay nisolo ny Sinemet saingy voatery nijanona izy noho ny voka-dratsiny. Nanandrana ny tifitra rehetra azonay izahay saingy tsy nisy nahomby. Tsy dia nisy fandrosoana firy tamin'ny fitadiavana fitsaboana azo antoka, niala tamin'ny fanafody aho noho ny voka-dratsiny. Ny mpitsabo anay dia nampahafantatra anay ny fitsaboana raokandro ao amin'ny Kycuyu Health Clinic Parkinson. Fahagagana ny fitsaboana. Sitrana be ny vadiko! Tsidiho ny kycuyuhealthclinic. co m
mary belinda hoy:
Janoary 22, 2022 amin'ny 17:15
Ny vadiko dia voan'ny aretin'ny Parkinson 2 taona lasa izay, fony izy 59. Niondrika izy, nangovitra, tsy nihetsika ny tanany havanana ary nisy fihetsehana ihany koa tao amin'ny vatany. Napetraka tao amin'ny Senemet nandritra ny 8 volana izy ary avy eo dia nampidirina sy nosoloina ny Senemet i Siferol, nandritra io vanim-potoana io dia voamarina fa voan'ny dementia ihany koa izy. Nanomboka nanao hallucinations izy, tsy nifandray intsony. Niahiahy aho fa ny fanafody no nesoriko tao amin'ny Siferol (araka ny fahalalan'ny dokotera) azy tamin'ny PD naturel herbal formulaire nafatray tao amin'ny TREE OF LIFE HEALTH CLINIC, dia nihena tanteraka ny soritr'aretiny nandritra ny 3 herinandro nampiasa ny TREE OF LIFE HEALTH aretina Parkinson voajanahary. raikipohy raokandro. Efa ho 61 taona izy izao ary salama tsara, nivadika tanteraka ilay aretina! (ww w. treeoflifeherbalclinic.com)